सेयरबाट कसरी पैसा कमाउने ? राकेश झुन्झुन्वालाको ५ लगानी टिप्स - Arthasansar
मंगलबार, १२ साउन २०७८, ११ : २७ मा प्रकाशित
हामी सबैलाई पैसा कमाउने चाहाना हुन्छ । मानिसहरूले पैसा कमाउन विभिन्न माध्यमहरू रोज्ने गर्दछन् । पैसाले पैसा कमाउने एक माध्यम हो सेयर बजार । सेयर बजारमा लगानी गर्न पनि पैसा मात्र भएर पुग्दैन । पैसालाई सही ठाउँमा लगानी गर्न उपयुक्त ज्ञान पनि हुनु पर्दछ ।
पछिल्लो समय सेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरू थपिने क्रम बढिरहेको छ । राम्रो अनुभव र ज्ञान नभइकनै लगानी गर्दा आफ्नो लगानी गुमेको गुनासाहरू पनि हामीले प्राय सुनिरहेका हुन्छौँ । त्यसैले, हरेक लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्नुअगावै राम्ररी अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अनि ठूला लगानीकर्ताहरूको अनुभवबाट पनि लगानी गर्न टिप्स लिन सकिन्छ । आज हामी तीनै एक लगानीकर्ताको सेयर टिप्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जो हजारौँ लगानीकर्ताहरूको मार्गदर्शक बनेका छन् । उनी हुन् राकेश झुन्झुन्वाला ।
राकेश झुन्झुन्वाला भारतीय सेयर बजारका सबैभन्दा प्रसिद्ध खेलाडीका रुपमा चिनिन्छन्। उनी ८ हजार रुपैयाँ लिएर सेयर बजारमा प्रवेश गरेका थिए । हाल उनी भारतको स्टक मार्केटका सबैभन्दा ठूला लगानीकर्ता बन्न सफल भएका छन् ।
राकेश झुन्झुन्वालाको ५ लगानी टिप्स यस प्रकारका छन् :
१. लगानी गर्ने समयमा आफैँप्रति बढी भरोसा गर्नुहोस् ।
२. साना सेयरलाई नजरअन्दाज गर्ने गल्ती कहिल्यै नगर्नुहोस् ।
३. मन्दीको समयमा पोर्टफोलियोमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुहोस् ।
४. सेयरलाई कम मुनाफामा बिक्री गर्न हतार नगर्नुहोस् ।
५. आफ्नो लगानीलाई विविधकरण गर्नुहोस् ।